Ny fitsidihana ny Statue of Liberty
Etazonia New York New York City
Sarivongana momba ny Torolàlana ho an'ny mpitsidika
Ny zavatra rehetra ilainao hanaovana ny fitsidihanao ny Statue of Liberty
Ny Statuette of Liberty dia fanomezana avy amin'ny vahoaka Frantsay ho an'ny vahoakan'i Etazonia ho mariky ny fisakaizana iraisam-pirenena notanterahina nandritra ny Revolisiona Amerikana. Ny Statue dia noforonin'i Frederic Auguste Bartholdi sy ny fanontana nataon'i Alexandre Gustave Eiffel.
Taorian'ny fahatarana maro (matetika noho ny olana ara-bola), ny Statue of Liberty dia notokanana tamin'ny 28 Oktobra 1886; folo taona lasa izay noho ny fankalazana ny Centennial izay natokana ho azy. Ny Statue of Liberty dia lasa mariky ny fahalalahana sy ny demokrasia.
More: Attractions of New York City
Sarintanin'ny Liberty Facts & Tantara
Rehefa nafahana avy any Frantsa nankany New York dia tonga 350 ny statue.
Raha vantany vao navoaka, dia naharitra efa-bolana ny fametrahana azy, ary vita ny 28 Oktobra 1886.
Sambany nanomboka tamin'ny 11 septambra 2001, dia naverina indray ny biraom-pandinihana ny Statue of Liberty tamin'ny 3 Aogositra 2004. Tamin'ny 4 Jolay 2009, dia nanokatra indray ny Crown izy ireo ho an'ireo mpitsidika vonona (sy afaka) hanohy ny dingana 354 tari-dalana. Ny fidirana an-habakabaka mankany amin'ny Statue of Liberty dia nakatona tamin'ny 29 Oktobra 2011 ho an'ny fanavaozana izay niandry herintaona teo ho eo, saingy noho ny fahavoazana teo amin'ny Nosy Liberty notohanana nandritra ny Rivo-doza Sandy, dia tapaka ny fanokafana indray. Ankehitriny, ireo mpitsidika izay mikasa mialoha dia afaka mahazo tapakila hianika ny Crown .
More: History & Culture of the Statue of Liberty from NPS
Inona no andrasana rehefa mitsidika ny Statue of Liberty?
Voalohany, mila mividy tapakila ianao. Manoro hevitra anao aho mividy izany mialoha.
Avy eo, mila mila fiarovana ianao alohan'ny hidirana ny sambo mankany Liberty Island. Ny fiarovana dia tena zava-dehibe ho an'ny mpitsidika ny Statue of Liberty - ny tsirairay dia hanazava ny filaminana (tafiditra ao anatin'izany ny fanaraha-maso an-dalam-pandehanana ny entam-barotra sy ny mandeha amin'ny metatra detectors) alohan'ny hidirana amin'ny sambo.
Rehefa miala ny Battery Park (Manhattan) dia mijanona ny sambo voalohany any Liberty Island. Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy miala ao amin'ny Nosy Liberty, na dia te hiala amin'ny fitsidihana ny Nosy Liberty aza izy ireo ary manohy mivantana any amin'ny Nosy Ellis. Rehefa avy nidina ny Nosy Liberty nankany amin'ny Nosy Ellis, dia niverina indray ny fiara indray tany amin'ny Battery Park. Ho an'ireo mpitsidika avy any New Jersey, dia mandeha an-dalambe ny làlana mankany amin'ny aleha, mitsidika ny Nosy Ellis aloha manaraka ny Liberty Island.
Ny fiarandalamby eo anelanelan'ny fiatoana rehetra dia eo amin'ny 10 minitra eo, saingy mamela fotoana fanampiny mba hivezivezena sy hiala.
Ireo mpitsidika izay miditra amin'ny Statue na ny fidirana an-dalamby na ny Crown dia hamerina indray ny fiarovana.
Sarintanin'ny Liberty Tickets & Hours
Ny fidirana ao amin'ny Park Liberty State dia maimaim-poana, fa tsy maintsy mividy tapakilam-pifamoivoizana ahatongavana any ianao.
Sarintanin'ny Ferry Ticket Prices: Adults $ 18; Senior Citizens (62+) $ 14; Ankizy (4-12) $ 9; Ankizy 3 sy maimaim-poana. Azonao atao ny mividy tapakila amin'ny sambo amin'ny Internet, amin'ny fiantsoana an'habakabaka 877-LADY-TIX na olona iray na any amin'ny toerana fialan-tsasatra
Ny fidirana ao amin'ny trano famakiam-boky (ary ny Statue of Liberty Museum) dia mitaky tapakila manokana saingy tsy mandany vola fanampiny. Ny fahazoana midina amin'ny tohatra ny tohatra mankany amin'ny Crown Cost $ 3 fanampiny (& misy ny fidirana amin'ny trano rongony & tranombakoka)
Fanampiny: Iza no taratasy mividiko mividy hitsidika ny Statue of Liberty sy / na ny Ellis Island?
Jereo ny Statue of Liberty and Ellis Island amin'ny Andro iray
Ny sambo mitondra anao mankany amin'ny Nosy Liberty koa dia mitsahatra any amin'ny Nosy Ellis. Ny fahitana roa na iray andro monja dia azo atao, fa ny ankamaroan'ny andro kosa no hitranga. Ataovy azo antoka fa tonga aloha ianao mba handefa ny sambo ary hanao drafitra mandritra ny 5-6 ora mba hanomezana fotoana ampy handehananao sy hijerena ireo nosy roa.
More: Jereo ny Statue of Liberty sy ny Ellis Island amin'ny Andro iray .
Sarivongana ho an'ny mpitsidika vahiny
Ny fitsidihana ny Statue of Liberty dia hetsika malaza ho an'ireo mpitsidika any New York City - ny toro-hevitra ho an'ny fitsidihana ny Statue of Liberty dia hanampy anao hametraka ny ankamaroan'ny fitsidihanao ary hanampy anao hisoroka ny sasany amin'ireo tranga mety hitranga voalohany.
Manatrika ny sarivongan'ny fahafahana amin'ny ankizy
Tsy misy fiampangana ho an'ny zaza latsaky ny 4 taona ny hitondra ny sambo mankany amin'ny Statue of Liberty sy Ellis Island.
Ny ankizy madinika 17 sy latsaka ambany dia tsy maintsy miaraka amin'ny olon-dehibe 25 taona na mihoatra rehefa handeha hitsidika ny Statue of Liberty and Ellis Island.
Tsy avela hiditra ao amin'ny Statue of Liberty ireo mpitaingina (amin'ny tranombakoka, tranom-bakoka sy ny fidirana amin'ny metro), saingy avela hiditra ao amin'ilay sambo sy ny manodidina ny Nosy Liberty izy ireo.
Misy efitrano malalaka mihazakazaka sy miala sasatra ao amin'ny Liberty Island.
Ny zanaka dia tokony ho farafahakeliny 4 metatra sy 4 taona, hianika amin'ny satroboninahitra.
Misy ihany koa: Torohevitra momba ny fitandroana ankizy ao amin'ny Statue of Liberty
Statue of Direction Liberty
Ny Statue of Liberty dia miorina ao amin'ny Nosy Liberty any New Harbor. Ho tonga any ianao dia mila mitondra sambo avy amin'ny Battery Park City na New Jersey.
Closest Subways mankany amin'ny Statue of Liberty: 4/5 mankany Bowling Green; N / R mankany Whitehall Street; 1 mankany amin'ny South Ferry (tokony ho ao anatin'ny fiara 5 ianao amin'ny fiaran-dalamby mba hialana amin'ny South Ferry). Araho ireo marika ho an'ny Castle Clinton mba hividianana tapakila amin'ny sambo mankany amin'ny Statue of Liberty.
Fomba fijerena ny sarin'ny Liberty
Raha te-hahita ny Statue of Liberty fotsiny ianao, fa tsy voatery hiady amin'ny fianihana ny satroboninahitra na mandeha manodidina ny Nosy Liberty, misy toerana marobe azonao atao sy ireo zavatra azonao atao ary jereo ny Statue of Liberty.
Battery Park na ny Brooklyn Promenade - raha te-hahita ny Statue of Liberty avy lavitra ianao, dia tsara toerana izany
Fialan-tsasatra any New York City - saika isan-karazany ny fitsangatsanganana manatrika ny mpandray anjara no manolotra ny sarin'ny Statue of Liberty, imbetsaka miaraka amin'ny fotoana mety tsara
Staten Island Ferry - mitondra ity sambo maimaim-poana mankany Staten Island ity mba hahitana tsara ny Harbor New York ary fahafahana hahita ny Statue of Liberty avy lavitra
Red Hook Fairway - ny cafe ety ivelany ao amin'ity supermarket Brooklyn ity dia manolotra ny fomba fijerin'ny Statue of Liberty
Toromarika momba ny fitsidihana mankany amin'ny Park Prospect any Brooklyn, New York
Rahoviana ny alatsinainy any St. Park sy Par Bay?
NYC Piano Bars
Ny tsara indrindra sy ny zava-pisotro tsara indrindra any New York City
Aiza no ampiasanao ny HHonors Points ao New York City
Efitrano dimy lehibe hihinam-be any Brooklyn Heights
Travel Guide to South Granville any Vancouver, BC
Ny fialan-tsasatra grika tsara indrindra any Charlotte
Macadamia Nuts sy Hawaii
Ny fandaharam-potoana isan-kerinandro ao amin'ny Hotel dia manome tombam-bidin'ny saran-dalana
Toerana hamitana poker ao Las Vegas
Air American Airlines miaraka amin'ny fifanarahana farany amin'ny fiaramanidina farany
Inona no tokony hataon'ny Tendrombohitra Fanjakan'i New Hampshire amin'ny ririnina
Dublin Discovered Cruises on the Liffey
Ireo Galeria 4 tena tsy manam-paharoa hotsidika any amin'ny Queens
Feo Frantsay 10 Mety tsy te hanandrana akory ianao
Recreational Marijuana ao amin'ny fanjakana Washington
Wildflower Hunting amin'ny Amerikana Southwest - Arizona